အင်္ဂလန်နိုင်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့ ၁၄:၀၀MT အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။.
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်မူဝါဒ ဆွေးနွေးပွဲများသည် ဗြိတိန်ငွေကြေး ပေါင်စတာလင်အတွက် အလွန်အရေးပါသည့်အတွက် ထိုဆွေးနွေးပွဲသတင်းကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒဆွေး​နွေးပွဲတွင် ငွေဖောင်းပွမှုများ မြင့်တက်လာတာကို တွေ့နေခဲ့ရသော်လည်း ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းကို 0.25%အတိုင်းပဲမပြောင်းဘဲထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဧပြီလအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ စားသုံးသူများ၏ပေးချေမှုအခြေအနေပြဒေတာသည် နှစ်စပိုင်းကထက် ၂. ၇ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ထိုပမာဏမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။.
ငွေဖောင်းပွမှုသည် ပေါင်စတာလင်ရဲ့ငွေလဲနှုန်းအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေဖောင်းပွမှုများလာပါက ဗြိတိန်ဗဟိုဘဏ်က စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနဲ့အထက်က အတိုးနှုန်းတင်ဖို့မဲပေးခဲ့မယ်ဆိုပါက ပေါင်စတာလင်ငွေကြေးတန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်တာဖြစ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက ပေါင်စတာလင်တန်ဖိုးကျဆင်းလာနိုင်တာဖြစ်ပါသည်။.